Umaka: 2014 | Martech Zone
Izobukeka Kanjani I-Internet Ekhulwini Landelayo?
NgeSonto, ngoJulayi 13, i-2014 NgoMgqibelo, July 12, 2014 Douglas Karr
Ukucabanga ukuthi izingane zami zikhula esikhathini lapho i-Intanethi ihlale ikhona lapha kuyamangalisa impela. Iqiniso lokuthi sisukile ekushayeleni okulula saba namadivayisi amaningi emakhaya ethu axhumene, aqopha, futhi asisize ukuthi sihambe nsuku zonke liyamangalisa. Ukucabanga iminyaka eyi-100 kusukela manje kungaphezu kokubona kwami. Ngokuqhuma kweselula namadivayisi ethu eba namandla ngokwengeziwe, angikwazi ukuqagela lokho okuboniswayo
NgoMgqibelo, July 5, 2014 Douglas Karr
Le infographic ihlanganisa imiphumela emihle evela ku-Accenture's CMO Insights ka-2014, kepha ngiyesaba ukuthi ivulwa ngesihloko esimangazayo esivezwe kabi. Ithi: Ama-78% wabaphenduli Bavuma ukuthi ukumaketha kulindeleke ukuthi kwenziwe ushintsho olukhulu eminyakeni emihlanu ezayo. Ngenhlonipho, angivumelani nalokhu. Ukumaketha kuyavela futhi idigital iphambili kumasu amaningi. Izabelomali ziyashintsha, amasu enhlalo nokuqukethwe anyuke kakhulu, futhi amathuluzi athola okuningi